संक्रमित छोरालाई हेरीरहेकी आमाको तस्बिरले संसारलाई नै बनायो भावुक ! | समाज
June 4, 2021 NepstokLeaveaComment on संक्रमित छोरालाई हेरीरहेकी आमाको तस्बिरले संसारलाई नै बनायो भावुक !
काठमाडौं। हामि सबैलाई थाहा नै छ संसारको सबैभन्दा ठुलो सम्बन्ध आमासँग नै हुन्छ । आमाको माया कत्तिसम्म अपार हुन्छ भन्ने हरेक सन्तानलाई थाहा नै छ।हामिले आमालाई भगवानको रुपमा लिने गर्छै । पछिल्लो समय एक तस्बिरले धेरैलाई भावुक बनाएको छ । तस्बिरमा अस्पतालमा भर्ती भएका कोभिडका गम्भीर बिरामीको उपचारका लागि भर्ना छन र आमाले झ्यालबाट हेरीरहेकि छिन्।